LG G4 ကိုစေ့စေ့စပ်စပ်စမ်းသပ်ခဲ့သည် Androidsis
ကျွန်ုပ်တို့သည် LG G4 ကိုလက်ရှိဈေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းနှင့်အပြည့်အ ၀ စမ်းသပ်ခဲ့သည်
Francisco Ruiz | | LG, reviews
ဒီနေ့ဟာငါစာရေးဆရာအဖြစ်အချိန်ကြာမြင့်စွာကတည်းကရရှိခဲ့တဲ့အကောင်းဆုံးနေ့တွေထဲကတစ်ခုပါ။ Androidsis.comand android operating system ၏ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဖြစ်ပျက်သမျှအားလုံးကိုသင့်အားအသိပေးရန်ဤတွင်ရေးသားခြင်း၏အားသာချက်များမှာ၊ လှည့်ကွက်တွေအကြောင်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ အခြားမည်သူမဆိုရှေ့တွင်အကောင်းဆုံး APK's ကိုဘယ်လိုရယူရမလဲဒါကငါ့ကိုပါခွင့်ပြုတာပဲ LG G4 အသစ်ကဲ့သို့ terminal များကိုအံ့အားသင့်စရာနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းအောင်စစ်ဆေးနိုင်မည်ဖြစ်သည် သို့မဟုတ်နိုင်ငံစုံ LG ၏စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်
အခုအသစ်အတွက် LG G4၊ အကောင်းဆုံးလူသိများအထူးနိုင်ငံတကာစံပြ LGH815ကိုရီးယားနိုင်ငံစုံနိုင်ငံအနေဖြင့်အိမ်စာကိုမည်သို့ကောင်းမွန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အား Android terminal အသစ်တစ်ခုဖြင့်တင်ဆက်ခြင်းထက် ပို၍ ကောင်းမွန်သော၊ အံ့မခန်းဖွယ်ကောင်းသော Android terminal အသစ်နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့ကိုတင်ဆက်ခြင်းအပြင်၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သောတိုးတက်မှုများကိုလည်းပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဒီဇိုင်းသည်ယခင်ကထက် LG G3 ထက် LG G3 ၏ပိုင်ရှင်များမှတင်ပြသောတိုင်ကြားချက်များနှင့်၎င်းတို့အားလုံးလုံးကြားခဲ့ရသောတိုင်ကြားချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ တိုးတက်မှုရှိနိုင်သမျှအရာအားလုံးကိုတိုးတက်စေရန်ဖြစ်သည်။ ငါတို့ရှေ့မှာဤအမှုကိုစီရင်ကြလော့ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အမြင်တွင်ယခုအချိန်တွင်အကောင်းဆုံး Android ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုဖြစ်သည် LG G4 ယင်း၏နားမလည်နိုင်လောက်အောင်နိမ့်ရောင်းအားအသံအတိုးအကျယ်နေသော်လည်း။
1 LG G4 မော်ဒယ် LGH815 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
2 LG G4 ၏အကောင်းဆုံး
3 LG G4 ၏အဆိုးဆုံး
LG G4 မော်ဒယ် LGH815 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
ပုံစံ LG က G4 LGH815
operating system Android 5.1 ကို LG UX 4.0 စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားသောအလွှာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်
ဖန်သားပြင် မျက်နှာပြင်အကျယ် ၂၅၆၀ x ၁၄၄၀ pixels ရှိသော Q'D resolution ဖြင့် ၅'၅ လက်မ LCD ရှိပြီး Quantum နည်းပညာနှင့် Corning Gorlla Glass5ကာကွယ်မှု
Processor ကို Qualcomm Snapdragon 808 1.8 Ghz ခြောက် core နှင့် 64-bit နည်းပညာ
ရမ်3Gb
internal memory 32 GB ရှိသောသိုလှောင်မှုနှင့်သိုလှောင်မှုအသုံးချပရိုဂရမ်များတပ်ဆင်ခြင်းအတွက် ၂၂ GB ခန့်သည် USB OTG နှင့်သိုလှောင်မှုပမာဏအထိ 22Tb အထိသိုလှောင်နိုင်သည့် microSD ကဒ်များကိုထောက်ပံ့ပေးထားသည်။
နောက်ကင်မရာ 16 Mpx resolution ဖြင့် ၁.၈ focal aperture နှင့် Laser Focus - ပုံရိပ်တည်ငြိမ်မှုနှင့် dual-flashLED တို့ပါဝင်သည်။
ရှေ့ကင်မရာ 8 Mpx
ဆက်သွယ်မှု 2G-3G-4G-Bluetooth 4.0-Wifi-GPS နှင့် aGPS-NFC-compass နှင့် FM ရေဒီယိုတို့ပါဝင်သည်။
သည်အခြား features တွေ ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းနှင့်လျင်မြန်စွာအားသွင်းခြင်း။
ဘက်ထရီ 3000 mAh လီသီယမ်အိုင်းယွန်း
အစီအမံ 148.9 76.1 9.8 မီလီမီတာ
အလေးချိန် 156 ဂရမ်
စြေး အမေဇုံပေါ်မှာ 545 ယူရိုကနေ
LG G4 ၏အကောင်းဆုံး
ဒီ LG G4 ကအကောင်းဆုံးပေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့သူကသူ့ရဲ့အကွာအဝေးမှာရှိတဲ့ဈေးအသက်သာဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့် high-end terminal တစ်ခုဖြစ်တာအပြင်ဒီနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ (သို့) ထပ်ဆောင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအထက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် display ကို Quantum နည်းပညာနှင့်အတူ IPS LG က G3 တွင်အဖြူရောင်နှင့်အဝါရောင် (သို့) အရောင်ဖျော့ဖျော့အရောင်များကိုတွေ့ရလေ့မရှိပါ။
Processor ကို အသုံးပြု၍ မယုံနိုင်လောက်သော fluidity နှင့် system performance ဖြစ်သည် Snapdragon 808 Hexacore 1,8 Ghz တစ် ဦး အံ့မခန်းနှင့်အတူပေါင်းစပ် GPU ကို Adreno 418 နှင့်၎င်း၏အောင်မြင်သော RAM3GB ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုအရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့သုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံအတွက်လိုအပ်တဲ့တည်ငြိမ်မှုနဲ့စွမ်းအားကိုပေးတယ် အဘယ်သူမျှမ lags သို့မဟုတ် terminal ကိုအပူ.
ဆန်းသစ်တီထွင်မှု, ကြော့နှင့်ဆွဲဆောင်မှုဒီဇိုင်းအဖြစ်အလုပ်လုပ်ရသောအတွက် သေးငယ်တဲ့မျက်နှာပြင်အဖြစ်များတတ်သည် လွယ်ကူစွာသင်၏အိတ်ကပ်ထဲ၌သယ်ဆောင်။ ပိုမိုလုံခြုံစိတ်ချရသောသဘာဝအစောင့်အရှောက်ကိုရရှိစေသည်။
တူသောစိတ်ခံစားမှုဖြည့်စွက် Smart ချိန်ညှိချက်များ, LG နှစ်ဆပြတင်းပေါက်၊ စမတ်သန့်ရှင်းရေး သို့မဟုတ်၏အရည်အသွေး applications များ လျင်မြန်သော Remote သင်၏ LG ကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးရှိအဝေးထိန်းခလုတ်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပေးသည် အမြန်မှတ်ဉာဏ် + ဖန်သားပြင်မှမှတ်စုများနှင့်တည်းဖြတ်ခြင်းဖြစ်နိုင်ချေများစွာရှိသည်။
အသုံးပြုသူအသစ်သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်အလွှာအသစ် LG UX 4.0 နှင့် အသစ်နှင့်အသစ်ပြန်လည်စမတ်သတင်းလွှာ သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်၊ အကြံဥာဏ်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးအများဆုံး application များပါ ၀ င်သော Google Now ကဒ်အမျိုးအစားများဖြစ်သည်။
အနောက်ဘက်ကင်မရာသည်မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်စမ်းသပ်အသုံးပြုခဲ့သည့်အကောင်းဆုံး Android ကင်မရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထူးခြားသောအရည်အသွေးရှိသောကင်မရာသည်၎င်း၏ရှပ်တာမြန်နှုန်းနှင့်အထင်ကြီးလောက်သောပြissuesနာများအတွက်ထင်ရှားသည် optical image stabilizer နှင့်၎င်း၏ လေဆာအာရုံစိုက် သို့မဟုတ်ယင်း၏စိတ်လှုပ်ရှားစရာ dual-Tone FlasLED.
LG G4 ၏အဆိုးဆုံး
ဒီ LG G4 ရဲ့အဆိုးဆုံးကတော့တစ်ပတ်အကြာမှာပဲငါပြောရမယ် သာ 3000 mAh ၏ဖြုတ်တပ်နိုင်သောဘက်ထရီLG G2 တွင်စွမ်းဆောင်ရည်ကြီးမားသည့်ဘက်ထရီကြီးမားသော်လည်း LG G4 တွင် LG G3 တွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းအလွန်နည်းပါးသော QHD ဖန်သားပြင်ကြောင့်သုံးစွဲမှုအလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုကြောင့် က။
ထိုကဲ့သို့သောကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်ချက်များ၏ထို့အပြင်သည့်အတွက်သံသယ terminal တစ်ခု ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းသို့မဟုတ်အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းခြင်းတန်ဖိုးထားလေးမြတ်သည် ၎င်းကိုပေးသောကြောင့်ပျမ်းမျှအသုံးပြုခြင်းသည်သုံးနာရီခန့်ကြာသောရလဒ်နှင့် ၁၄ နာရီခန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိလိမ့်မည်။
LG က G4
သုံးသပ်ချက် - Francisco Ruiz
Quantum နည်းပညာနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့် display ကို
ဘက်ထရီနှင့် terminal ကိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » ကျွန်ုပ်တို့သည် LG G4 ကိုလက်ရှိဈေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းနှင့်အပြည့်အ ၀ စမ်းသပ်ခဲ့သည်
Ohhh ငါ hehe လိုချင်တယ်၊ ပြီးတော့ touch screen ပြwithနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်ဗျားဘာသိသလဲ။
ဒီ terminal က Lg G3 လိုအရူးလိုအပူရှိန်လား။
Luis Miguel Mendez ဟုသူကပြောသည်
LG G2 မှဆင်းသက်လာပြီးယခုအချိန်တွင် Samsung galaxy s6 ကိုဝယ်ယူပြီးကျွန်ုပ်အလွန်ပျော်ရွှင်မိသည်ဟုဆိုရမည်။ တစ်ခုတည်းသောအရာက g2 မှာဘက်ထရီသက်တမ်းကြာရှည်နေပေမယ့်မြန်ဆန်တဲ့အားသွင်းမှုကတော်တော်များများအတွက်ပါ။ ငါအယ်ဒီတာနှင့်လုံးဝသဘောမတူ; ကျွန်တော့်အတွက်တော့ဒီ G4 နဲ့ LG ကအဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်နေတာကိုအပြစ်ပြုခဲ့ပြီး G3 ထက်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနည်းပြီးစိတ်ကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့ဒီဇိုင်းကိုပေးပါတယ်။ ဘောင်ပိုကောင်းယခင်မော်ဒယ်အတွက်အသုံးပြုကြသည်။ ဒါကြောင့်ငါ G4 အတွက်မပြောင်းလဲခဲ့ဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမှန်တရားကတော့ Samsung ကဒီနှစ်မှာပိုကောင်းတဲ့ဒီဇိုင်းရှိပြီးနောက်ဆုံးမှာသူလိုချင်တဲ့ premium ပစ္စည်းတွေရှိနေလို့ပဲ။ LG ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်၊ G2 ကိုသဘောကျတယ်။ ဒါပေမယ့် G4 နဲ့ LG ကကျွန်တော့်ကိုမဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော့်အတွက်ငြီးငွေ့စရာကောင်းတဲ့ရှေ့ဒီဇိုင်းရှိပြီး G3 ကိုဒီဇိုင်းပိုင်းမှာပိုကြိုက်တယ်၊ ပြီးတော့အနည်းငယ်ပိုကြီးတာကလည်းမကူညီပါဘူး။ ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်မျှလက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ယခုနှစ်တွင် Samsung သည်၎င်း၏အိမ်စာကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်ဝန်ခံရမည်။ ဆောင်းပါး၏တည်းဖြတ်သူအတွက်ပြင်ဆင်ရန်အချက်မှာ g4 တွင်ဂေါ်ရီလာဖန်ခွက် ၄ မရှိ၊
Luis Miguel Méndezအားပြန်ပြောပါ
လေးစားဖွယ်ကောင်းသောထင်မြင်ယူဆချက်ထက် ပို၍ သေချာပါသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်သင်အခွင့်အလမ်းရရှိခဲ့ပြီဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကိုသင်စေ့စေ့စပ်စပ်စမ်းသပ်မည်ဆိုလျှင်၎င်းသည်၎င်း၏ကျက်သရေ၊ တည်ငြိမ်မှု၊ ကင်မရာနှင့်စနစ်၏ချောချောမွေ့မွေ့ကိုသင်လက်နက်ချလိမ့်မည်ဟုသေချာသည်။ Ahh နဲ့ကျွန်မ LG g2 ကလာတာပါ။ ပြီးတော့ငါမှာ LG g3 ရှိတယ်။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့သူတို့ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါတွေအားလုံးက LG G2 ဟာငါ့အတွက်သမိုင်းမှာအကောင်းဆုံး Android Terminal တွေထဲမှာတစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်တယ်။
Rodrigo Terceros Paz ဟုသူကပြောသည်
ပိုကောင်းတဲ့ဒီဇိုင်းလား။ တကယ်လား LG g2 g3 g4 သည်အမှိုက်သရိုက်ပုံစံကိုဆွဲယူလာသည်။ ထိုသို့အကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းကြောင်းထွက်လှည့်?
Rodrigo Terceros Paz အားပြန်ပြောပါ
androidsis ပါ ဟုသူကပြောသည်
သင်၏မိတ်ဆွေအတွက်အမှိုက်ကားသူသည်အခြားသူများအတွက်ဖြစ်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ၎င်းသည်အယ်ဒီတာ Francisco Ruiz Antequera ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအမြင်ဖြစ်သည်။ မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေ။
Ignacio Roa Troncoso ဟုသူကပြောသည်
စူးစမ်းလေ့လာပါ၊ အခြားသူများက၎င်းကို ပို၍ ကောင်းသည်ဟုယူမှတ်ခြင်းသည်သင်ကိုက်ခဲသလော။
Ignacio Roa Troncoso အားပြန်ပြောပါ
ပြီးတော့ LG G2 ကိုငါအရမ်းနှစ်သက်မိတုန်းသက်တမ်းတိုးခြင်းကိုစဉ်းစားစရာမလိုဘူး။
Juan David Aguilar Blandon ဟုသူကပြောသည်
LG4S တွင် Note5သို့မဟုတ် Samsung S3 ၏ကင်မရာကိုကျွန်ုပ်မည်သို့တပ်ဆင်နိုင်သည်ကိုမည်သူမဆိုသိရှိပါသလား။ သို့မဟုတ်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သော Samsung မော်ဒယ်များနှင့်သာသဟဇာတဖြစ်ပြီး၎င်းနှင့်အကောင်းဆုံးကင်မရာ🙂
Juan David Aguilar Blandon အားစာပြန်ပါ
G4 ၏ဒီဇိုင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ဖြစ်သည်၊ လက်ရှိအထင်ရှားဆုံးသောအဆိုးဆုံးဖြစ်သည်။ နောက်ကျောဖုံးကိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ဖူးသမျှထဲမှာအဆိုးဆုံးပဲ။ သူတို့ဝတ်ထားတဲ့အနက်ရောင်နဲ့အညိုရောင်သားရေပစ္စည်းတွေမဟုတ်ဘူး။ အကြောင်းပြချက်များထဲမှတစ်ခုမှာဘာကြောင့်ဒီလောက်ရောင်းအားနည်းတာလဲ။
ဖုန်းတစ်လုံးကိုဖယ်ထုတ်ရန်အဖုံးတစ်ခုတည်းလုံလောက်သော်လည်းလုံလောက်သည်။ ငါအံ့သြဖွယ် LG G2 ဖုန်းကနေလာပါတယ်။ သိချင်စိတ်က g3 နှင့် g4 ထက် ပို၍ ပြည့်စုံသည်။ 1080p ဗွီဒီယိုကို 60fps နှုန်းဖြင့်ရိုက်ကူးခြင်း၊ ဒီအရာကငါ့ကို g4 စိတ်ပျက်စေခဲ့ပေမယ့် Sony z3 ကိုပါလျှင်သာမကစိတ်ပျက်စေခဲ့သည်။ HTC m9 ။ တကယ်တော့ဒီတစ်ခုမှာ iPhone Plus ဟာပိုပြီးသိသာထင်ရှားပြီး galaxy s6 ပါ။ ငါ g4 ကိုရွေးခဲ့တဲ့နေ့တွေအားလုံးကိုငါစမ်းကြည့်ခဲ့ပေမယ့်ဒီကင်မရာကိုကျွန်တော်ပိုနှစ်သက်သည်မှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကင်မရာကြောင့်ပြိုင်ဆိုင်မှုမရှိသေးပါ။ ၎င်း၏ MANUAL mode နှင့် RAW ပုံစံဖြင့်မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခြင်းသည်သင့်အားဒေါ်လာရာပေါင်းများစွာတန်ဖိုးရှိသည့် reflex ကင်မရာတစ်ခုနှင့်တူသည်ကို၎င်းသည်အခြားသူများနှင့်မတူအောင်ထူးခြားစေသည်။ ၎င်းသည်ရူပဗေဒသို့မဟုတ်သတ္တုသို့မဟုတ်ပလပ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းမဟုတ်ဘဲထူးခြားချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ။ တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးချိန်တွင်အများစုသည်အကာအကွယ်တစ်ခုထားကာအဆုံးသတ်တော့မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အကယ်၍ ဘက်ထရီသည် G2 ထက်နည်းသည်ဆိုပါက။ Blu-ray သို့မဟုတ် DVD ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ သင်သည်ကင်မရာ၏ resolution ကိုလျှော့ချ။ မရပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်မျက်စိကိုချဲ့ခြင်းကဲ့သို့သောဗီဒီယိုစနစ်များမဆောင်ပါ။
Pepe Benitez ဟုသူကပြောသည်
သင်၏ဗီဒီယိုကို lg g4 (ကျွန်ုပ် vodafone မှစောင့်ဆိုင်းနေသည့်) ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်သင်၏ဗီဒီယိုကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ သင်၏ lg g2 ပေါ်တွင်ပြေးနေသောခလုတ် (၂) ဂိမ်းကိုတွေ့သောအခါ၎င်းကိုကျွန်ုပ်ကြိုက်ခဲ့သည်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်၏ "ဟောင်း" မှတ်စု (၂) တွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ပြေးအဘယ်အရာကိုမြင်ကြည့်ပါ။ ပြီးတော့ငါ lg g4 လိုပဲအလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာစစ်ဆေးတဲ့အခါငါအံ့သြသွားတယ်။ ဒီဂိမ်းကို g2 ဟာ "သခွားသီး" လို့ပြောဖို့ဘာကြောင့်အသုံးပြုတာလဲ၊ မှတ်ချက် ၂၊
Pepe Benitez အားပြန်ပြောပါ
OnePlus2သည်4GB RAM ဖြင့်ရောက်ရှိမည်
တရားဝင် Amazon Cloud Drive အက်ပလီကေးရှင်းကို Play Store တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်